Ukwelashwa kwe-urticaria - Global Platform Allergy & Airways Patient Platform
Ukwelashwa kwe-urticariaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-03T10:31:18+01:00
Ukwelashwa ngemithi kwenziwa ngendlela efanayo maqondana nazo zonke izimo ze-urticaria engapheli.
Ngokuya ngohlelo olunezigaba ezintathu, le mithi elandelayo iyasetshenziswa.
Omalizumab (okusha ekwelashweni)
Le mithi, ephikisana nemiphumela ye-histamine futhi eyaziwa kakhulu kulabo abanenkinga yokungezwani komzimba, isetshenziswa kuqala. Ekuqaleni, kunconywa isilinganiso esilula sansuku zonke, esifana nesivame ukusetshenziswa maqondana neziguli ezingezwani nokwaliwa. Lokhu kuhambelana, isibonelo, no-5 mg we-levocetirizine noma i-desloratadine noma u-10 mg cetirizine noma i-loratadine noma u-20 mg we-bilastine noma u-180 mg we-fexofenadine. Uma, ngemuva kwamasonto amabili wokuphathwa okuqhubekayo kwe-antihistamine, kusenokungahambi kahle, incwadi kadokotela ingakhishwa ngemithi yedosi ephakeme kakhulu. Kuze kube kane okuchazwe kupheshana lephakeji njengomthamo ojwayelekile. Lokhu akuyona ingozi. Kodwa-ke, amanani aphezulu abangela ukukhathala noma ukulala kwabanye abantu.
Cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zazo zonke iziguli ze-urticaria zingaphila kahle nalesi sifo ngama-antihistamine nezinye izindlela ezingezona ezemithi. Noma kunjalo, ezinye izinketho ziyatholakala kwesithathu esisele.
AmaLeukotrienes yizithunywa zamakhemikhali ezidalwe ngokuhlangana nokuvuvukala futhi zidlala indima ekuthuthukiseni izimpawu zesifuba somoya njengokuvuvukala nokuncipha kwemigwaqo yomoya. Lesi sidakamizwa, futhi, ngakho-ke sisetshenziselwa ikakhulukazi i-asthmatics, kodwa futhi siyasebenza ekwelapheni ezinye iziguli ze-urticaria.
Izitha zeLeukotriene ezifana neMontelukast zithuthukisa imiphumela yama-leukotrienes ahlasela ukuvuvukala. Kodwa-ke, zithathwa njengezisebenza kancane kunama-antihistamine.
ICyclosporin A icindezela amasosha omzimba futhi kanjalo namaseli amakhulu. Ibuye isetshenziselwe i-psoriasis enamandla, i-atopic dermatitis enamandla noma isifo samathambo esingapheli / isifo samathambo. Kungadala — kwesinye isikhathi okunzima — imiphumela emibi ngakho-ke ukwelashwa kufanele kuhlolwe kakhulu.
Umuthi omusha yi-omalizumab. Lesi sidakamizwa, futhi, ekuqaleni sakhiwa ukwelapha i-asthma. Ukusebenza kwayo ngokumelene ne-urticaria kwatholakala ngengozi. I-Omalizumab ayithathwa njengethebhulethi kepha ijojowe ngaphansi kwesikhumba. I-Omalizumab iyasebenza ngokulwa ne-immunoglobulin E (IgE). Empeleni, le immunoglobulin — okungenani lokhu sekukholelwa kuze kube manje — idlala indima encane kuphela ezinhlotsheni eziningi ze-urticaria. Kodwa-ke, kuyaziwa ukuthi esimweni seziguli ezaliwa ngumzimba i-IgE idlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenzeni kwamangqamuzana omzimba. Ngokucatshangelwa, ukuvinjelwa kwe-IgE nge-omalizumab kumane nje kuthikameze ukusebenza kwamangqamuzana ama-mast noma i- "cascade", eholela kwizifuba ezengeziwe kanye ne-angioedema.
Kunezifundo eziningi zemitholampilo ezibonisa ukuthi i-omalizumab yinhle futhi iphephile kepha ngaphezu kwakho konke lokho ivame ukusebenza ngokushesha okukhulu. Uma ukungaphatheki kahle kungalawulwa ngaleli regimen ngesikhathi esifushane, i-cortisone ingalawulwa njengethebhulethi noma umjovo. Lesi sixazululo kufanele ngaso sonke isikhathi sisetshenziswe njengokwelapha okukodwa noma njengokwelashwa kwesikhashana. Ukwelashwa unomphela nge-cortisone akulungile maqondana ne-urticaria.
Izindlela zokuhlola zifaka, ngokwesibonelo, ukwelashwa okuyisibonakaliso ngama-probiotic, lokho okubizwa ngokuthi ukwelashwa kwe-histamine habituation therapy (nge-histaglobin), imijovo yegazi eliphelele, ne-acupuncture.
Ikhithi yezimo eziphuthumayo
Ezimweni ze-urticaria engapheli, isib. Ezimweni lapho kukhona ukuvuvukala kwe-mucosal okubangela ubunzima bokugwinya nokuphefumula okuncane, ukuthwalwa njalo kwento ebizwa nge-emergency kit okungalawulwa kakhulu ukuhlaselwa kwe-urticaria. Iningi lezinto eziphuthumayo zinokulungiswa kwe-cortisone esebenza ngokushesha kanye ne-antihistamine.